Banyere Anyị - Shanghai Best China Industry Co., Ltd.
Anyị factory dị na kasị ike obodo na Asia-Pacific na mpaghara, Shanghai. All anyị ngwaahịa imewe, oghe ebu, sample, mmepụta, frosted, elu okpomọkụ otu-agba na multicolor obibi, gilt (silver) zọ, sere, gbakọta imeta onye-nkwụsị ọrụ nnyefe. Anyị na ngwaahịa nke ntuli aka ihe, si ngwaọrụ, Efrata, agbaze usoro, akpụ, annealing, nhazi, ule, nkwakọ ngwaahịa na ndị ọzọ mmepụta Filiks na-Emechara n'okpuru ISO90002 quality usoro.
Ke mma nkwakọ, anyị ọ bụghị naanị nwere ndị kasị ibu nhọrọ ọ bụla nke iko na plastic nkwakọ ma na-na-eme mmadụ ọgaranya anyị ngwaahịa dịgasị iche iche. Site na ijikọta ọkachamara ahịa 'ọrụ n'oge ya, anyị nwere onwe anyị mba trading ụlọ ọrụ na Shanghai kwa. Anyị nwere ọtụtụ ahụmahụ na àgwà akara, mba ahịa, mbupụ, lọjistik, otú ahụ ka anyị nwere ike ịbụ gị anya na ntị na China na-eme ka n'aka na-enye gị nri na ngwaahịa na nke kacha mma price, na nke kasị nso ụzọ oge.
● Nye innovate Packaging Ngwọta
● Zute ma ọ bụ gafere anyị Ahịa 'mkpa na-atụ anya
● Nye elu àgwà na ahịa-e nkwakọ
● On-oge nnyefe
● Anyị na-atụ anya ibe-emepe emepe na imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa n'ụwa nile